Midowga Musharaxiinta oo ka digey qaabka ay u socoto doorashada golaha shacabka - Jowhar somali news leader
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay maanta magaalada Muqdisho waxa ay ugaga hadleen qaabka ay ku socoto doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad,iyagoo walaac ka muujiyay habka ay u socoto doorashada.
Kulanka kadib ayaa Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu sheegay inay ka digayaan in sidaan kusii socoto doorashada Golaha Shacabka oo uu sheegay inay tahay qaab boob doorasho ah.
“Hadafka loo aasaasay midowga musharaxiinta weli waa taagan yahay waxaan diidney muddo kororsi dad nool ayaa u dhintey,doorashada dalka waa la qaloociyay jidka waa laga leexiyey,sida ay hadda wax ku socdaana waxa aka dhalan kara burbur baahsan,doorasho la boobana waan soo aragnay.”ayuu yiri Afhayeenka midowga musharaxiinta.
“haddii sidaan lagu socdo waxa dalka ka dhalan kara burbur baahsan, doorasho la boobo waa soo aragnay, tanna waxay noqon doontaa nuqul aanay Soomaaliya horay u arkin waligeed”
Sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenka in Midowga Musharaxiinta ay bilaabi doonaan kulamo ay qeybaha bulshada la yeelan doonaan si looga tashto oo looga hortago burbur ku yimaada dalka.
Midowga Musharaxiinta ayaa hore digniino kala duwan uga soo saaray qaabka ay u socoto doorashada iyagoo ku hanjabay inay tallaabooyin qaadi doonaan.